မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: ရှရစ်က်မလုပ်မိစေဖို့ သတိပြု
မြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့ အထူးသဖြင့် အချို့မွတ်စလင်မ်အမျိုးသမီးတွေ ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ကို မဖတ်ဖြစ်ကြဘူး။ ဖတ်ပါလို့ပြောရင် အချို့ကကုရ်အာန်ကိုင်ရမှာ ဝန်လေးတယ်။ စီးပွါးရေး၊ ပညာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စတဲ့ ကျပ်တည်းတဲ့အရေးကိစ္စပေါ်လာရင် ဆွလာ့သ်ဖတ်၊ ကုရ်အာန်ဖတ်၊ သဝါကာရ်လုပ်ပြီး အရှင့်ထံအပ်နှံအကူအညီတောင်းပြီး အရှင့်မြတ်ထံတော်မှ လမ်းပြ ကူညီစောင်မမှုကို သည်းခံစွာစောင့်စားနေရပါမယ်။ ဘဝမှာအခက်အခဲဆိုတာ သေချာပြန်ကြည့်ရင် နီအမာ့သ် ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ အခက်အခဲကနေ လူတွေ ရင့်ကျက်မှုရလာတယ်။ အခက်အခဲကနေ
ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုဘယ်ဆုရတဲ့ လူတွေဟာဇိမ်နဲ့နေပြီး ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးမှ နိုဘယ်ဆုကိုရလာကြတာ နမူနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူ့ဘဝမှာ ဆိုးတစ်လှည့် ကောင်းတစ်လှည့်ဆီရှိကြတယ်။ အခက်အခဲကြောင့် အရှင်မြတ်ကို ယုံကြည်မှု လျှော့နည်းပြီး ရှရစ်က်လုပ်မိရင် မထင်မှတ်တဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာ မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ ကုရ်အာန်ဖတ်သာဖတ်တတ်ပြီး အဓိပ္ပယ်မသိရင် ဘေးလူ ဆွဲရာပါတတ်ပါတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိမိတို့မသိသောအရာ နောက်ကို မလိုက်ဖို့လည်းမိန့်ထားပါတယ်။
အချို့အီမန်အားနည်းတော့ ဘာသာရေးဖက်မှာလည်းဖတ်ရွတ်ကြပြီး အကြားအမြင်၊ ဗေဒင်၊ ဆေးဆရာတွေကိုလည်း အားကိုးကြတယ်။ မိဘက ဘာသာရေးအားနည်းတော့ အဲဒီအမွေ သားသမီးတွေဆီပါ တစ်ဆင့်ကူးစက်ကြတယ်။ Astaqfirullah... ဒါပေမယ့် သားသမီးတွေခေတ်မှာ အင်တာနက်အားကောင်းတော့ အွန်လိုင်းမှာ ဘာသာရေးဗဟုသုတတွေ အတော်များများကိုရ
ကြတယ်။ တစ်ချို့လူငယ်တွေက သူတို့ လူကြီးတွေထက်တောင် ဘာသာရေးအသိပညာ ပိုကြွယ်ဝလာကြတယ်။ ဒီကနေ့ အချို့လူကြီးတွေကိုကော လူငယ် လူလတ်တွေကိုပါ ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်ဖတ်ပါလို့တိုက်တွန်းရင် စိတ်မပါကြဘူး။ ကုရ်အာန်မှာ မိမိတို့ဖန်ဆင်းရှင်က ဘာတွေ မိန့်ထားလည်းမသိရတာ အလွန်နှမြောစရာကောင်းပါတယ်။ ပျားရည်ကိုယ့်ရှေ့မှာရှိပြီး မသောက်သုံးမိလို့ သူ့ရဲ့ချိုမြိန်တဲ့အရသာနဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မခံစားလိုက်ရတာနဲ့တူတယ်။
အမှားကိုသိသူတွေအတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကနောင်တနဲ့ သော်ဗာဖတ်ပြီး အရှင့်ဖက်ကိုပြန်လှည့်ခြင်းကို နှစ်သက်ခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်။
သော်ဗာဖတ်ပြီး ထပ်ခါအပြစ်ကျူးလွန်နေရင်တော့ အပြစ်ဒဏ်ဆိုတာ ကျရောက်နိုင်တယ်။ ဒီ ဒွန္နယာမှာ ဖိသ်နာ ဖြားယောင်းမှုတွေ၊ ဟရမ်တွေ မိမိတို့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိကြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပြီး အသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဒီနေရာမှာ အရှင်မြတ်က မိမိတို့ကို
ပြုပြင်ပေးဖို့မစောင့်ပါနဲ့။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာ အသိစိတ်နဲ့ပြုပြင်ရပါမယ်။ ကုရ်အာန်မှာ အရှင်မြတ်ကမိန့်ထားပြီးပါပြီမိမိကိုယ်ကို မပြုပြင်သမျှကာလပတ်လုံး အရှင်မြတ်ကလည်းပြုပြင်ပေးမည် မဟုတ်လို့ကုရ်အာန် စူရဟ် ၁၃၊ အာယသ် ၁၁ မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
မိမိတို့အနေနဲ့အရှင့်လမ်းမှန်ပေါ်မှာ ရှေ့တိုးပြီလျှောက်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိရင် မိမိတို့စိတ်ကိုချုပ်ထိန်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း အရှင်မြတ်ထံ အသနားခံပြီး လိုလိုလားလားတောင်းခံရပါမယ်။ အရှင့်မြတ်ကမိမိတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့်နေသော အရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ရ ည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆိုးကျိုး ကောင်းကျိုးဆိုတာလည်း မိမိတို့ထံသက်ရောက်ပါတယ်။
အမှန်တရားကို သိမြင်၊ ကျင့်၊ ကြံ တတ်အောင် လူသားတွေ အမျှော်အမြင်ရှိအောင် သွန်သင်ပေးတဲ့ ကုရ်အာန်မွတ်စလင်မ်တွေ အတွက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုရ်အာန်စကျလာခါစတုန်းက ပထမအာယာ့သ်တော်မှာ ဂျီဗရာအီရ် (အ) က ဖတ်ပါလို့ စသင်ခဲ့တာပေါ့။
Fa-'inna ma-`al-`usri yusra.
Inna ma-'al'usri yus-ra
So,verily, with every difficulty, there is relief.
(Surah 'Inshirah 94:6)
မွတ်စလင်မ်တိုင်းလမ်းမှန်ရောက်ကြပါစေ။ အာမီးန် ယာရဗ္ဗ အာလ် လမီးန်။
Posted by Ordinary person at 12:26 PM
“အစ္စလာမ် နှင့် အစားအစာ”
မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးများ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန် ဆေးဝါးန...
ဒုက္ခနဲ့ သုခကြားက ကြိုးတံတား
Awaken in the Dream Story